Sida loo Tijaabi Speed ​​ah ee Android
Baarista Internet Speed ​​on Android
Si aad u bilaabaan imtixaanka xawaaraha internet qalabka Android aad ka soo baxa sida soo socota:
1. Tag Google Play Store qalabka Android iyo nooca "speedtest.net". Dooro app calaamadeeyay imtixaanka xawaaraha by Ookla.
2. Tubada badhanka soo dajiyo iyo sugto rakibo si uu u dhameystiro. Waxaad u helida horumarka download ee bar wargelinta.
3. Marka la rakibo dhamaato, ay helaan "Speedtest" icon in qalab android iyo waxa ka jaftaa in la furo app.
4. Marka app ka fura ka jaftaa "Ka bilow Test" badhanka oo u muuqata in xarunta ee shaashadda.
5. app waxay bilaabi doonaan inay tijaabiso waxaad kala soo bixi iyo xawaaraha geliyaan wax yar. First xawaaraha download lagu baari doonaa.
6. Dabadeedna, xawaaraha Upload internet-ka la baari doonaa.
7. Natiijooyinka la soo bandhigi doonaa dhamaadka imtixaanka internet xawaare sida soo socota:
Imtixaanka Android Performance
An Android ayaa qaab ciyaareed ku xiran tahay arrimo badan oo kala duwan. Waa isku-dar ah processor, GPU, xusuusta, bandwidth iyo arrimo kale oo badan. Haddii aad xiisaynayso in imtixaanka waxqabadka aad android marka la eego processor iyo xawaaraha GPU, waxaad samayn kartaa isticmaalka app ah sida Control Device oo kuu ogolaanaysaa inaad tweak nidaamka iyo OS goobaha. Isticmaalka barnaamijyadooda sida aad overclock karo ama underclock aad processor iyo sidoo kale jabsadaan goobaha kale ee nidaamka si loo arko saameynta mid kasta oo ku saabsan wax-qabadka guud ee android. Sidoo kale, si ay u tijaabiso waxqabadka aad android marka la eego sawiro aad u adeegsan kartaa BaseMarkX; app ah si gaar ah loogu talagalay si ay u tijaabiso 2D iyo 3D awood orodka graphic ee ah isticmaalka qaadashada android ee engine midnimada 3D.
Si kastaba ha ahaatee, tijaabinta waxqabadka aad android la isticmaalayo mid ka mid barnaamijyadooda sida by mid ka mid ah shaqeynta kasta oo aan qaadan doontaa oo keliya ilaa waqti badan aad, waxa ay noqon yaabaa in kaaftoomi weyn. Sidaa darteed, qaybta xigta ee qodobkan qoreysa qaar Talooyin iyo tabaha in aad isticmaali karto si ay u tijaabiso wax qabadka android fudayd.
Talooyin iyo tabaha loogu Android Speed ​​Test
Waxaad had iyo jeer ka dhigi kara isticmaalka Chine in si khaas ah loogu qorsheeyay inay tijaabiso qaab android ah. Chine noocan oo kale ah waxaa loo yaqaan barnaamijyadooda benchmarking iyo wax badan oo iyaga ka mid ah oo dhan in la soo bixi karaa Google Play dukaanka. Waxaan qaadan doonaa eegno ugu fiican seddex in this article.
Cabbirka AnTuTu waa qalab benchmarking android oo tijaabiso perfromance qalab android ee ku salaysan qaar ka mid ah koobin sanyihiin sida qaab processor, 2D naqshadeynta waxqabadka iyo 3D qaab graphic iwm Waa lacag la'aan ah laga helayaa Google Play Store oo ka mid ah dadka isticmaala raadinaya waa mid aad loo jecel yahay si ay u tijaabiso waxqabadkooda android.
Si loo eego xawaaraha android ayaa isticmaalaya AnTuTu Cabbirka app, raac tallaabooyinkan:
1. Downlaod iyo rakibi Cabbirka AnTuTu in aad qalab android ka https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antutu.ABenchMark&hl=en . Sug habka loo xirxiro si ay u buuxiyaan oo aan bilowno app ee qalabka android aad.
2. In tab ay ku calaamadeysan tahay "Test" ku dhufatey "Test" button aad u bilowdo nidaamka benchmarking ah. Additonally, waxaad bedelan kartaa in ay tab "Device Info" in ay soo bandhigaan wixii faahfaahin ah oo ku saabsan qalab aad.
3. AnTuTu Cabbirka tijaabin doonaa qaab qalab aad ka dhanka ah tiro ka mid ah koobin sida processor iyo xawaaraha RAM iwm iyo soo bandhigaan natiijooyinka. Waxaad ordi karaan imtixaanka mar kale garaacida ah "button Test Mar" ama aad usoo saari karnaa natiijada faahfaahsan oo la isticmaalayo badhanka calaamadsan "Details".
4. Waxaa intaa dheer, Cabbirka AnTuTu sidoo kale ogolaanayaa users is barbar dhexeeya natiijada perfromance laba hindiseen.
Cabbirka Vellamo Mobile
Cabbirka Vellamo Mobile waa app benchmarking ah by Qualcom taas oo inta badan diiradda on imtixaanka xawaaraha browser lagu daro processor imtixaanka, xasuusta, iyo imtixaanka bandwidth. Waxa kale oo ka mid ah hab Multicore ah in u ku imtixaamaa tayada shaqo ee Telcom dun iyo maaraynta.
Si aad u isticmaasho daydo Vellamo Mobile tijaabo ah oo aad xawaaraha Android ee, raac tilmaamaha fudud:
Downlaod iyo rakibi Cabbirka Vellamo Mobile si aad qalab android ka https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quicinc.vellamo&hl=en . Sug habka loo xirxiro si ay u buuxiyaan oo aan bilowno app ee qalabka android aad.
Dooro nooc ka mid ah imtixaanka in aad rabto in aad ku ordi qalab aad adigoo riixaya badhanka fallaadhiina waxay ka dhiganta in imtixaanka. Waxaa jira tiro balaadhan oo ah la heli karo teste in Cabbirka app Vellamo Mobile ah.
Marka aad dhamaysid ee imtixaanada aad is barbardhigi kartaa natiijada la aaladaha kale ee aad.
Imtixaanka PassMark Performance
Imtixaanka Performance PassMark waa app benchmarking caan ah android in lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah ka Play Google Store. Waxaa hubinayaa qaab android ka mid ah mid processor, naqshadeynta, iyo baaritaano xusuusta iyo nidaamka. Natiijada baaritaanka ka dibna waxaa lagu soo gudbin kartaa bogga intarnetka app iyo la barbar dhigi karaa natiijada baaritaanka aaladaha kale ee.
Si aad u bilaabi tijaabinta qaab aad android ayaa la isticmaalayo Baaritaanka PassMark Performance, qaabkan soo socda:
Download iyo rakibi app Performance PassMark ka https://play.google.com/store/apps/details?id=com.passmark.pt_mobile&hl=en oo ku xidh in mobile aad. Sug rakibo si ay u buuxiyaan oo aan bilowno app ee qalabka android aad.
Waxaad dooran kartaa imtixaanada shaqsi doorataa mid kasta oo ka category baahisey ama aad si fudud mid ordi karaan oo dhan imtixaanada ka mid garaacida ah "Cabbirka Run" badhanka hoose ee shaashadda.
App wuxuu socon doonaa oo dhan mid ka mid ah baaritaano ay mid toos ah iyo isu geeyn ah iyo sidoo kale muujiyaan oo dhan dhibcaha ee sabab kasta oo si gaar ah sida hoos ku qoran.
Imtixaanka wadareed lagu soo bandhigi karo si fudud iyadoo la yaraynayo qaybaha sida lagu muujiyey jaantuskan soo socda.
Natiijooyinkaasi waxay markaas la barbar dhigi karaa natiijada qalab kale. Taas aawadeed, bedesho tab ay ku calaamadeysan tahay "barbardhig". Natiijada barbardhig la soo bandhigi doonaa sida soo socota:
An Ultimate Tusaha Tababaraha Samsung Gear
Taageerayaan Video qaabab by HTC Android Phones (HTC Mid ka mid ah mid)
> Resource > Android > Sida loo Tijaabi Speed ​​ah ee Android